Akụkọ - Ahịhịa Dye dị ugbu a na China - Ndị na-emepụta Kwụsị Ornata Iwu, Ahịa Na-ebugharị Dramatically
Pricegwọ nke ịgbasa ekike e kewapụrụ ọzọ! Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd., nke nwere oke mgbawa na Machị 21, nwere ikike nke 17,000 tọn / afọ nke m-phenylenediamine (nke dị n'etiti), nke bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke abụọ na ụlọ ọrụ ahụ. Thekọ nke phenylenediamine ọkọnọ na ịrị elu ọnụ ahịa emeela ka ịrị elu na ọnụahịa nke ịgbasa agba.
I. Mbelata nke akụrụngwa
Ike mmepụta nke phenylenediamine nke China bụ ihe dịka tọn 99,000 / afọ, n'otu n'otu, Zhejiang Longsheng Group 65,000 tọn / afọ, Sichuan Hongguang Special Chemical Co., Ltd. 17,000 tọn / afọ, Jiangsu Tianjiayi Chemical Co., Ltd. 17,000 tọn / afọ. Ihe ọghọm mgbawa ahụ ga - emetụta ihe dịka 20% nke ikike ahịa nke m-phenylenediamine, nke ga - eduga na mmụba na ọnụ ahịa m-phenylenediamine, na mgbada agbasa agbasa agbasa ga - ebili.
Dị ka akụkọ si kwuo, n'ụbọchị ihe mberede ahụ, ụfọdụ ndị na-agbasasị ụlọ ọrụ ndị na-agba agba na ụlọ ọrụ ndị na-etinye aka na ha akwụsịla ịnata iwu. Ọnụ ego azụmahịa ahụ achụsara ndị e ji esiji ákwà abawanyela n'ụbọchị abụọ gara aga. Ọnụ ego ụlọ ọrụ nke m-phenylenediamine esila na USD7100 / MT gaa USD15,000 / MT, a maghị azụmahịa azụmahịa. E wezụga nke ahụ, ihe nkesa a na-achụsakwa malitere ịbawanye ọnụego site na Machị 24, na-ewere Blue 56, Na-agbasasị Red 60 dịka ọmụmaatụ. Ka ọ dị ugbu a, ọnụahịa nke Blue 56 na-agbasasị bụ 25.45 ~ 31.30 USD / kg.
II. Ọtụtụ ihe na-asọ
Na mgbakwunye na ihe ndị ihe mgbawa ahụ metụtara, mmụba ọnụahịa nke ihe a na-achụsasị ejikọtara metụtara njikọ dị ala na nso nso a nke ụlọ ọrụ dị ala na mbelata ikike ikike.
Na March, ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ na agba adịghị arụsi ọrụ ike n'oge oge kachasị elu, ọnụahịa nke ịchụsasị dyes dịkwa oke amị. Ogo nke ịgbasa akwa na ụlọ ọrụ na ndị na-agba agba na ndị na-ekesa ya dị obere karịa nke ahụ n'otu oge nke afọ gara aga. Mgbe mgbawa ahụ gasịrị, ahịa na-agbasasịkarị akwa. N'okpuru mmetụta uche nke ọdịda ahụ, iwu ndị zụrụ ahịa rịrị elu, na-ebugharị ọnụahịa nke ịchụsasị dyes ka o bilie.
E wezụga nke ahụ, Mbelata na-agbasasị dye ikike bụkwa ihe dị mkpa. Aghọtara na enwere ihe ruru 150,000 tọn / afọ nke gbasara ike dye na mpaghara Jiangsu nke dị na mgbago ugwu China. N'ihi ihe ndị dị ka nlekọta nchekwa gburugburu ebe obibi na 2018, mmepụta dị oke. Mgbe ihe mberede mgbawa ahụ mere na ụlọ ọrụ ahụ nke zubere ịmaliteghachi ngwa ngwa, ịlaghachi ọrụ abaala nnukwu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla laghachiri ọrụ, a ga-ebelata mmepụta ga-ebelata.
III. Ahịa ahụ ga-adị elu.
Na na mgbe e mesịrị ogbo, na-agbasasị e ji esiji ákwà ahịa ga-anọgide na-elu.
N'ihe banyere inye akụrụngwa, mgbe ntiwapụ nke Tianjiayi, usoro nnyefe na ikike mmepụta nke m-phenylenediamine ga-enwe nnukwu mgbanwe. A na-atụ anya na ikike mmepụta ihe nke phenylenediamine ga-ebelata site na 99,000 gara aga na 70,000 tọn na 2019. N'ihe oriri, na mmụba nke ikike mmepụta ihe, a na-atụ anya na oriri nke phenylenediamine ga-akarị 80,000 tọn na 2019. “Na mkpokọta, ọkọnọ nke m-phenylenediamine ga-anọgide na-adị mkpụmkpụ, ọnụahịa ahụ ga-aga n’ihu na-ebili, mana mmụba a kapịrị ọnụ dabere etu e si akwụ Zhejiang Longsheng na Sichuan Hongguang. Nrịgo ọnụ ahịa akụrụngwa ga-eweta nkwado ọnụ ahịa ahịa na-agbasa agbasa.
Ọzọkwa, ihe ọghọm nke ihe mgbawa a metụtara, ụlọ ọrụ kemịkal nke usoro ntinye ume na usoro mbelata nke hydrogenation ga-edobe nkwenye dị oke mkpa, na-eme ka e nweta ụcha na ndị na-etiti ọnụ na ọnụ ala.
A kọọrọ na ụlọ ọrụ metụtara dye na Jiangsu Yancheng Xiangshui Ecological Chemical Industrial Park, dị ka Jiangsu Aonkyi Chemical Co., Ltd. na Jiangsu Zhijiang Chemical Company, nọ n'ọnọdụ nkwusioru ugbu a.
N'ịbụ ndị na-emetụta nke a, a na-atụ anya ka agba odo na-aga n'ihu na-ebili mgbe ọnụọgụ ahịa na-aga n'ihu; Achụsasị Blue 60, Gbasaa Blue 56, Gbasaa Red 60 ga-anọgide na-ebili, nke n'aka nke ya ga-eduga ndị ọzọ dyes ịba ụba ọnụ.